CBD waa gaaban Cannabidiol, waa mid ka mid dabiici-dhaca qayb ka cannabinoid ugu caansan ee warshad cannabis ah. Si ka duwan Britain kale oo caan ah, tetrahydrocannabinol (THC), CBD gebi ahaanba aan maskaxda oo aan marnaba ka dhigaysa aad dareento "sare". In kastoo CBD waa kaliya mid ka mid ah in ka badan 60 cannabinoids laga helay warshad cannabis ah, baaritaano badan oo cilmi ah ayaa waxay tilmaamay in CBD leeyahay awood weyn ku daweyn of cannabinoids oo dhan.
CBD laga dheefay karaa hemp iyo marijuana. All CBD our waxaa laga dabiiciga ah, dhirta ku salaysan hemp, taas oo sharci ah oo dhan 50 gobol. CBD oo ka soo jeeda hemp waa hodan ku ah faa'iidooyinka daawooyinka iyo daweynta, iyo si dabiici ah u hooseeya ee THC.
Waa maxay qaynuun CBD?
Waa maxay farqiga u dhexeeya hemp iyo marijuana?
Faraqa 1. Plant
Inkastoo labada dhirta ay qayb ka yihiin noocyada la mid ah, hemp iyo marijuana leeyihiin qaar ka mid ah faraq weyn.
1) a.Hemp koraa ilaa 15 dhudhun oo dherer iyo waxa uu leeyahay caws weyn dheer, waxaa si raaxo leh u wada buuxiyey.
2) a. Marijuana dhif ka badan 5 feet dhererka iyo dibadda koraa la caleemo badan iyo burooyinkoodii, dhirta u baahan tahay meel kasta si ay u koraan.
In marijuana iyo hemp labadaba, laba nooc oo cannabinoids taagan: Tetrahydrocannabinol (THC) & Cannabidiol (CBD)
1) hemp leeyahay oo kali ah THC kasta at dhan, oo leh content celcelis ahaan inta u dhaxaysa 0.05-1%. Hemp ku jira CBD badan warshad celceliska cannabis.
2) Ubax geedka celcelis ahaan marijuana ku jira heerarka THC ee 10-14%.
2) saliidda Marijuana ka kooban 50-60% THC, 10-15% CBD.
4. Isticmaalka saliid ah kasta
1) hemp, iyadoo sare CBD, content THC hooseeyo, sida caadiga ah loo isticmaalo loogu talogalay nasashada, huurka, dabacsan, dajinta.
2) marijuana, la THC sare, content CBD yar yahay, inta badan loo isticmaalaa madadaalo iyo maskaxda.
CBD, gaaban cannabidiol, waa kiimiko ah non-maskaxda ee Xashiish, mas'uul ka ah cannabises badan oo gargaarka caafimaadka. Dhinaca kale, THC, gaaban tetrahydrocannabinol, xarunta maskaxda ee marijuana, taas oo keenta in ay "sare", ee la xidhiidha arrimaha cannabis, iyagu laba cannabinoids si buuxda u gaar ah, kuwaas oo ah fasalka ka mid ah kiimiko ah.
1) High The
THC waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee loo yaqaan for isagoo qayb maskaxda ee marijuana. CBD, si kastaba ha ahaatee, waa non-maskaxda. In si kale loo dhigo, CBD ma heli karo aad sare. Inkasta oo niyad jab in dadka isticmaala madadaalada, feature gaar this of CBD waa waxa ay ka dhigeysaa inay sidaas rafcaanka sida dawo.
Dhakhaatiirta inta badan door bidaan daawaynta la waxyeellooyin yar, taas oo ahayd caqabad weyn ku aqbalo ee marijuana caafimaadka. Sidoo kale, CBD ayaa loo isticmaali jiray in lagu daweeyo carruurta yaryar la nno kala duwan.
THC la og yahay in ay keeni dadka qaar ka mid ah si ay u dareemaan walwal ama khayaano. Laakiin CBD la rumeysan yahay in ay leeyihiin saamayn ka soo horjeeda. Dhab ahaantii, baadhistu waxay muujineysaa in CBD ka shaqeeya si uu uga hortago walaaca sababay liqo THC. Tiro diraasado ah ayaa sidoo kale soo jeedinaya in CBD yarayn karaa walaaca marka ay maamusho ay u gaar ah.
3) ama dajiya
Waxa intaa dheer in isagoo aan maskaxda, CBD u muuqataa in ay leeyihiin guryaha ee waallida dajiya. Cilmi-waxay aaminsan yihiin in CBD odoroso laga yaabaa in dadka isticmaala marijuana ka hesho oo aad u sarreeya by yaraynta saameynta psychosis-sida ee THC ee. Si kastaba ha ahaatee, sharciyeynta dhaqdhaqaaqa maanka-altering of THC ee ma aha oo dhan CBD u fiican yahay. On u gaar ah, CBD la baaro sida daawada ah ee waallida dajiya loogu talagalay dadka qaba cudurka dhimirka.
Mid ka mid ah isticmaalka ugu badan ee marijuana waa sida gargaarka hurdo. THC la rumeysan yahay in ay ka mas'uul ah inta badan saamaynta hurdada keenta waxaayna marijuana noqon. Dhinaca kale, waxbarashada soo jeedin CBD u dhaqmo si kor loogu qaado xillo, samaynta CBD doorashada miskiin ah sida daawada hurdo. Saamaynta soo horjeeda ee CBD iyo THC on hurdo sharax laga yaabaa sababta nooc ka mid ah Jidka cannabis dadka isticmaala si ay u dareemaan hurdo halka qaar kalena waxaa lagu yaqaan in ay kor u qaado tamarta.
Inkastoo dalalka ugu leeyihiin sharciyo adag marijuana iyo THC ku wareegsan, xaaladda sharci ee CBD ka yar cad. Maraykanka gudihiisa, CBD waa farsamo sharci-darrada ah tan iyo markii ay lagu tilmaamay inay tahay daroogada Schedule waxaan a uu qorayo sharciga federaalka. Foomka A dawooyinka ee CBD, loo yaqaan Epidiolex, waxaa dhawaan ka bariyeelay by FDA si loo tijaabiyo in carruurta la qalalka daran.
Dhinaca kale, CBD waxaa laga helaa hemp, kaas oo lagu kartaa si sharci ah laga keeno oo lagu iibiyo Mareykanka shirkadaha qaarkood ayaa faa'idaysteen dol this by galinta doodii hemp sare-CBD ka yimid wadamada kale ee ay hemp la soo saaray.
Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya CBD hemp iyo marijuana CBD?
"CBD waa CBD-Wax macno ah ma meeshay ka timaado."
Haa ma laha. The ubax-dushooda iyo caleemo of qaar ka mid ah muruq hemp warshadaha laga yaabaa in il-gal ah CBD (arrimaha sharciga habase), laakiin hemp waa by jirin loola jeedaa asal ah loo isitcmaalo cannabidiol. hemp Industrial caadi ahaan ka kooban cannabidiol fog ka yar cannabis CBD-hodanka ah. xaddi weyn oo hemp warshadaha waxaa looga baahan yahay inay soo saaro xaddi yar oo CBD, oon kor u halista ah ee sunta sun ah, maxaa yeelay, hemp yahay "bio-accumulator" in barbaro macdanaha culus ka soo ciidda. Single-Britain CBD dhexsameeysmo shaybaarka ama soo bixiyay iyo safeeyey ka hemp warshadaha maqan terpenes, daawooyinka muhiimka ah iyo cannabinoids sare laga helay nooc cannabis. xeryahooda Kuwani ula falgalaan CBD iyo THC si kor loogu qaado faa'iidooyinka ay ku daweyn.
Maxaad CBD waa sharci?
Sida laga soo xigtay Farm Bill 2014 saxiixdeen Madaxweyne Barack Obama, Qaybta 7606 ee Farm ee Bill 2014 idman koritaanka iyo beerista of hemp warshadaha, kaas oo CBD Xaamid waxuu ka.
Waayo, sharcinimada CBD (cannabidiol), farqiga ugu weyn waa heerka THC. Iyada oo dhirta marijuana ku jira heerar sare oo THC, hemp ku jira aad u yar oo ah kiimikada maskaxda, oo ay ku jiraan wax ka badan 0.3% THC. Farqiga Tani kaliya waa waxa ugu badan ku tiirsan yihiin in la kala saaro hemp ka marijuana.
Xeerka Industrial hemp beeraha ee 2013 - Fiienaada Sharciga Ashyaada Mukhaadaraadka ka horjoogsanaya in hemp warshadaha ka qeexidda "marijuana." Qeexayaa "hemp warshadaha" loola jeedaa dhirta Cannabis sativa ah L. iyo qayb ka mid ah dhirta sida, haddii sii kordhaya ama ma, la Delta sagaal fiirsashada tetrahydrocannabinol a aan ka badnayn 0.3 boqolkiiba ku salaysan miisaanka qalalan. Hoosaadyo sativa Cannabis L. si ay ula kulmaan xad-fiirsashada in haddii qof u koraa ama waxa maaraysa ujeedooyin ee samaynta hemp warshadaha iyadoo la raacayo sharciga gobolka.
Skov: "The code cusub daroogada (7350) aasaasay [Rule ah] ma waxaa ka mid ah qalabka ama alaabta kuwaasi oo ka baxsan qeexidda marijuana ku xusan ee la kontoroolo Muqaadaraadka Act (CSA). The code daroogada cusub waxaa ka mid ah oo kaliya kuwa u yeela in hoos qeexid CSA of marijuana ah. Haddii wax soo saarka ka koobnayd oo keliya qaybo ka mid ah dhirta cannabis laga saaray qeexidda CSA of marijuana ah, wax soo saarka sida aan doonaynin in lagu daro in xeerka cusub ee daroogada (7350) ama code daroogada marijuana (7360) ee "
Maxay yihiin faa'iidooyinka CBD?
CBD (cannabidiol) waxay bixisaa spectrum buuxda ee faa'iidooyinka caafimaad laga helay cannabis caafimaad laakiin aan lahayn dhibaatooyinka soo raaca THC. In goobaha caafimaad oo CBD ayaa la sheegay inay ka caawin kansarka dawayn, caawin gariir, caabuq, welwel, yalaalugo, stress, cadaadis dhiig oo hooseeya, madax xanuun iyo welwel badan oo caafimaad oo dheeraad ah. wararka qaarkood sheegayaan in ay isugu soo urureen sare ee CBD dhab kobcin kara saamaynta THC. Inkasta oo aan ma ka dhigi kartaa sheegashada sida saamaynta CBD, Cannabidiol saliid, ama saliid CBD hemp, innagu waxaynu nahay kuwa u dooda iyo talinaynaa raadinaya madax-bannaan, waayo, faa'iidooyinka CBD.
Waxaan ka CBD heli doonaa "sare"?
No. Our alaabta Warbixiinta hemp ayaa dhamaantood ka hemp warshadaha, taas oo kaliya uu leeyahay raad xaddiga THC sameeyey, sidaas darteed ma jiro saameyn maskaxda ka qaadato waxyaabaha our. Waa THC in uu yahay qayb ka mid ah maskaxda cannabis.
Maxay yihiin faa'iidooyinka isticmaalka hemp?
Hemp ku jira qiimaha nutitional fiican, bixinta qaybaha nafaqo lagama maarmaan u yeedhay acids Muhiimka ah dufan in jidhka aadanaha uusan si dabiici ah ma soo saaraan, oo waa la wada baabbi'in by cunto. Dheeraad ah, soo baxaya cilmi taageertaa isticmaalka CBD ka saliidda hemp for guud fayo-qabka iyo aad dhawra caafimaad, laakiin ma ka heli aad "sare". Ma aha oo kaliya waa hemp la cusboonaysiin karo iyo ka dhakhso u kordhaya, ku dhawaad ​​kasta qayb ka mid ah warshadda waa alaabada - cunto, fiber, qalabka dhismaha iyo shidaalka, iyadoo dad lagu qiyaasay 25,000 oo isticmaalada. Hemp sequesters CO2 iyo ma u baahan tahay doogga in ay baraaraan. Waxaa sidoo kale ka dhigeysa in ciidda xaalad ka wanaagsan yahay ka hor inta aan lagu beeray.
Marka ku filan, guud ahaan oo keliya qaadataa 20-30 daqiiqo waxay noqon wax ku ool ah. Dadka intooda badan marka ugu horreysa ee laga bilaabo baxay, ma garanayo waxa aad filan oo inta badan iska eafiya iskana in la bilaabo si ay u caawiyaan xaaladooda. Tan iyo ma jiraan wax "sare" si aad u sheegto, dadka badankiisu ma oga in ay wax ka qabanayso. waxay Kaliya muddo ka dib la ogaado in xanuun kasta oo ay u lahayd ma aha mar dambe halkaas ama ma aha sida aad u daran. The "dareen" waa sidaas dareemeyn in sida caadiga ah, in ay tahay in la aqoonsado kartay oo dhan waa ku dejinaaya loo dareemeyn. Ka dib markii dhowr ah isticmaalka, dad badan ayaa soo wariyay in ay hadda aragto in ay "qaadashada laayeen" off daqiiqo ka dib markii maamulka. Laakiin, dadka cusub ugu, waxay filayaan isbedel weyn oo ay kaliya ma jecli in, haddii uu loo isticmaalay maamulka xanuunka. War dabacsan xanuunka inta badan waa cadaalad ah dareemi marka la qaadanayo waxyaabahaan oo tiro sax ah.
Marka la isticmaalayo Oil Vape ah, sida waan aqaan inta ay le'eg CBD inaan ka soo raynayo?
Sida ay dadka ugu tagaan oo ku saabsan waa adigoo hal kaydadka ah ka go'an in ay hemp Vape Oil. Waxay ku rakibi kaydadka fuulay qalinka vape iyo u isticmaali si teelteel ah maalintii oo dhan. By og fiirsashada of CBD ee saliidda vape ay isticmaalayso, waxay xisaabi kartaa inta CBD waa in kaydadka markii ay buuxin. Tusaale ahaan, saliid vape our ayaa 25mg of CBD per 1.5ml oo saliid ah vape. 1.5ml waa qadar caadiga ah si ay u buuxiyaan kaydadka ah (laakiin aan lacagta keliya ..... sidaas qabsato sida ay kaydadka aad isticmaasho). Sidaas, marka la isticmaalayo our saliid vape 10ml 100mg, haddii qof doonayay 20mg of CBD, waxay vape lahaa kaydadka a 2ml buuxa mar kasta oo ay u isticmaali. Laakiin, mar kale, waxay ku xiran tahay sida ay u dheer jiitaa lagu qabtay ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doonin inta ay le'eg CBD dhab galaa jirka qofka.
Our dhalada 1oml 100mg: Oil Vape waxay leedahay 10mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna waxaad qaadan lahaa 1ml.
Our dhalada 1oml 300mg: Oil Vape waxay leedahay 30mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad ka qaadi lahayd 1 / 3ml.
Our dhalada 1oml 500mg: Oil Vape waxay leedahay 50mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.2ml qaadan lahaa.
Our dhalada 1oml 1000mg: Oil Vape waxay leedahay 100mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.1ml qaadan lahaa.
Our dhalada 15ml 100mg: Oil Vape waxay leedahay 20 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 1.5ml qaadan lahaa.
Our dhalada 15ml 300mg: Oil Vape waxay leedahay 20mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.5ml qaadan lahaa.
Our dhalada 15ml 500mg: Oil Vape waxay leedahay 100 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.3ml qaadan lahaa.
Our dhalada 15ml 1000mg: Oil Vape waxay leedahay 200 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.15ml qaadan lahaa.
Our dhalada 3oml 100mg: Oil Vape waxay leedahay 10 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna waxaad qaadan lahaa 3ml.
Our dhalada 3oml 300mg: Oil Vape waxay leedahay 10mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna waxaad qaadan lahaa 1ml.
Our dhalada 3oml 500mg: Oil Vape waxay leedahay 50 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.6ml qaadan lahaa.
Our dhalada 3oml 1000mg: Oil Vape waxay leedahay 100 / 3mg of CBD halkii 1 ml oo saliid ah vape. Sidaas daraaddeed, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad 10mg of CBD, ka dibna aad 0.3ml qaadan lahaa.
Waa maxay mesh V +?
Aw, badeecada ee aan iibinno waa sharci in dhammaan 50 States iyo ku dhowaad 40 dal oo adduunka. Waxa aanu u baahan qoro midna kaar caafimaad oo dalka Mareykanka ah. Haddii aad tahay qof wadan kale, fadlan hubi sharciyada maxalliga ah. Gobolo badan ayaa waxay bilaabeen sharciyeeysay CBD Oil ka Marijuana, iyo dalalka qaar ka mid ah ayaa hoos u codeeyay. Iyadoo CBD waa CBD iyo wax dhib ah malaha haddii ay timaado ka marijuana ama hemp maxaa yeelay, waxay u noqon wax ku ool ah, maxaa yeelay, marijuana leedahay arrimaha sharciga, CBD Oil ka Marijuana laga yaabaa ama laga yaabaa in aanay sharciga ee gobolka. Laakiin, CBD Oil ka hemp WAA SHARCIGA oo dhan 50 gobol, iyadoo aan loo eegin xeerarka aad gobolka on marijuana iyo marijuana CBD Oil.
Waxaan mari doonaa Test Drug ka dib markii la isticmaalayo Products kuwanu?
Waxaan u qoray article dhan on our Blog Page oo arrintan ku saabsan. Fadlan guji horyaalka soo socda si aad u aragto: MA QOF KEENA CBD inay tijaabiso FIICAN shaashadda DAROOGADA A?
Waa maxay sidaas u qaali ah?